ယူကေ ရဲ့ စီးပွါးရေး တစေ့တစောင်း UK Economy – V | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Business & Economics » ယူကေ ရဲ့ စီးပွါးရေး တစေ့တစောင်း UK Economy – V
ယူကေ ရဲ့ စီးပွါးရေး တစေ့တစောင်း UK Economy – V
Posted by Kyaemon on Oct 1, 2012 in Business & Economics, Education, Society & Lifestyle |0comments
ယူကေ ရဲ့ စီးပွါးရေးကိုလေ့လာရအောင်
ယူကေ ရဲ့ စီးပွါးရေး ဟာကမ်ဘာမှာ အမှတ် (၇) သို့မဟုတ် အမှတ် (၈)အကြီးဆုံးဖြစ်ပြီး၊
ဥရောပ မှာ ကျတော့ ဂျာမဏီ ပြီးရင် ဒုတိယ နေရာ လိုလို တတိယနေရာ လိုလို ပြင်သစ်နဲ့မတိမ်းမယိမ်းဖြစ်နေတာ၊
၁၈ ရာစုနှစ်မှာ ယူကေ က ကမ်ဘာမှာ ပဌမဦးဆုံး စက်မှုလက်မှုထွန်းကားတဲ့နိုင်ငံအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲခဲ့ပြီး
၁၉ ရာစုနှစ်မှာလဲ ၄င်းက ကမ်ဘာ့စီးပွါးရေးကိုလွှမ်းမိုးချယ်လှယ်နိုင်ခဲ့သေးတာ၊
၁၉ ရာစုနှစ် ကုန်ခါနီးမှာကျတော့ ယူအက်စ် နဲ့ဂျာမဏီတို့နဲ့စီးပွါးရေးအင်အားပိုပြီးပြိုင်ဆိုင်ရတာ၊
ကမ်ဘာစစ်ကြီးနှစ်ခုအပြီးမှာ တော့ယူကေ ကအင်အားချိနဲ့လာပြီး၊
ယူအက်စ်က ယူကေကို ကျော်တက်ကာ စီးပွါးရေးအင်အား အကြီးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်လာတော့တာ၊
ဒါပေမဲ့လဲ ယူကေ က အရေးပါ တဲ့နေရာမှာ ပါတုန်းပါ၊
ယူကေ က လေယဉ်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း မှာကမ်ဘာ မှာ ဒုတိယ သို့မဟုတ် တတိယ လိုက်ပြီး၊
မြောက်ပိုင်းပင်လယ်ရှိ ယူကေပိုင်ရေနံနဲ့ဓာတ်ငွေ့ ကွင်းပြင်တို့ကနေ ယူကေရဲ့စီးပွါးကိုအထူးအကျိုးပြုတာ၊
၂၀၀၇ က ရာဖြတ်စစ်တမ်းအရ ပေါင်စတာလင်းငွေ ၂၅၀၀၀၀ သန်း တန်ဘိုးရှိတာလို့ခန့်မှန်းထားတာ၊
In the 18th century the UK was the first country in the world to industrialise, and during the 19th century possessedadominant role in the global economy. From the late-19th century the Second Industrial Revolution in the United States and Germany presented an increasing economic challenge to Britain. Despite victory, the costs of fighting both the First World War and Second World War further weakened the UK’s relative economic position, and by 1945 it had been superseded by the United States as the world’s dominant economic power. However, it still maintainsasignificant role in the world economy.
The UK has one of the world’s most globalised economies. London is the world’s largest financial centre alongside New York and has the largest city GDP in Europe. As of December 2010 the UK had the third-largest stock of both inward and outward foreign direct investment (in each case after the United States and France). The aerospace industry of the UK is the second- or third-largest national aerospace industry, depending upon the method of measurement. The pharmaceutical industry plays an important role in the UK economy and the country has the third-highest share of global pharmaceutical R&D expenditures (after the United States and Japan). The British economy is boosted by North Sea oil and gas reserves, valued at an estimated £250 billion in 2007.
၂၀၀၈ နှစ်လယ်ပိုင်းက စပြီး ၂၀၀၉ နှစ်ကုန်အထိ ယူကေ ကစီးပွါးရေးကပ်ဆိုက် ပြီး၊စီးပွါးရေး ၄.၉ % ကျသွားတာ၊
၂၀၁၂ ပဌမ သုံးလပတ် မှာ ယူကေ က ဒုတိယ တကြိမ်စီးပွါးရေး ကပ်ထပ်ဆိုက်တာ၊
ဇူလိုင် ဩဂုတ် ကျမှစီးပွါးရေး အနည်းငယ်စီ ပြန်တက်လာတာ၊
In Q1 of 2012, the UK economy enteredadouble-dip recession, in the process posting three consecutive negative quarters of growth. While the first half of 2012 saw inflationary pressures subside and business confidence increase,anumber of fundamental weaknesses remained, most notablyadecline in the productivity of British business. As of the end of Q2 of 2012, the UK economy had contracted 1.2% in three quarters. The ‘Jubilee’ effect has been blamed for the contraction in Q2 2012 due to lost working days. Figures from July and August indicate strong growth returning. Services showed increased expansion while manufacturing posted growth of 3.2% in July, the strongest since July 2002. Industrial production increased 2.9 %, the strongest since February 1987.
တဦးချင်းဝင်ငွေ မှာ က $ ၃၆၀၀၀ နဲ့ $ ၃၉၆၀၀ လောက်မှာရှိပြီး၊ ကမ်ဘာအဆင့် အမှတ်စဉ် ၁၇ နဲ့ ၂၀ လောက်မှာရှိတာ
ထုတ်ကုန် ပို့တာ က ယူအက်စ် ၁၄.၃ % ဂျာမဏီ ၁၀.၅ % နဲ့ရှေ့ကပြေးတာ၊
တင်သွင်းကုန် က ဂျာမဏီ ၁၂.၅ % တရုပ်နိုင်ငံ ၈.၄ % နဲ့ရှေ့ကပြေးတာ၊
£428.6 billion (2010)
Manufactured goods, fuels, chemicals, food stuffs, beverages, tobacco, clothes, cars, military equipment, entertainment, steel, computer software, finance, banking, electrical goods, electronics, machinery, pharmaceutical products
United States 14.3%, Germany 10.5%, Netherlands 8.0%, France 7.2%, Ireland 6.0%, Belgium and Luxembourg 5.1%, Spain 3.7%, Italy 3.3%, China 3.2% (2010, not including services)
£477.9 billion (2010)
Germany 12.5%, China 8.4%, United States 7.6%, Netherlands 7.3%, France 6.0%, Norway 5.7%, Belgium and Luxembourg 5.0%, Italy 3.9%, Ireland 3.4% (2010, not including services)